Ukubethelela iiBlogger-Ubudlelwane boluntu
NgoMgqibelo, Julayi 13, 2013 NgoLwesithathu, Agasti 13, 2014 Douglas Karr
Ndifumene le imeyile evela kubuchwephesha bobudlelwane boluntu ukubona ukuba ndiza kubhloga malunga nomthengi wabo kwi Martech Zone. Le yiyo yonke i-imeyile, elandelwa lulwazi loqhakamshelwano kunye nenombolo yomnxeba.
[Igama laKlayenti] yandisa ishishini kunye neenkonzo zayo zamanye amazwe ngokufumana umboneleli weenkonzo zemultimedia esekwe e-UK kwiveki ezayo, eqinisa ukomelela komhlaba kunye nokufikelela kwiimarike ezintsha.
Ngale nto ithengwayo [Igama laKlayenti], elaziwa ngokuvelisa amava emultimedia angenakuthelekiswa nanto kwimveliso kwihlabathi liphela, iya kuphehlelela kwimakethi yaseYurophu ukomeleza inkxaso kubathengi benkampani yengingqi eYurophu, kuMbindi Mpuma, eAfrika naseIndiya. Okwangoku ixhasa amalinge eendaba ezolonwabo ezivenkileni, kwi-Intanethi nakwisixhobo kumazwe angama-70, [Igama laKlayenti] inceda abathengi abanjengeStarbucks Coffee®.
Ngolwazi oluthe kratya, nceda ubone ushicilelo lwe-Wire Wire.
Ngaba unganomdla wokubhala malunga nokufumana [kweKlayenti igama elitsha)?
Ixesha lokuba rant othandekayo kubudlelwane boluntu.
Kuqala… ngobuchwephesha lo SPAM wophula umthetho we-CAN-SPAM. Undicenga kwaye awuboneleli ngendlela engabhaliswanga kwi-imeyile yakho (kuba uyifihle njenge-imeyile yakho). Andinabo ubudlelwane beshishini nawe, kwaye andikaze ndibenobudlelwane nawe.
ndine Akukho luvo ngubani umthengi wakho okanye kutheni ndifanele ndibhale ngazo. Ukubhala nje amagama abo akundiniki ukuqonda kwinkampani yabo, iimveliso zabo okanye iinkonzo zabo.
Khange undixelele ukuba bayathenga bani. Nguwuphi umboneleli ngenkonzo? Kutheni ifanelekile kubaphulaphuli bam?
Sukundithumela ikhonkco ukufuna ulwazi olongezelelweyo. Ixesha lam lixabisekile. Ndixelele ukuba kutheni ezi ndaba ngokukodwa efanelekileyo kwibhlog yam kunye nabaphulaphuli bayo.
Ndixelele into ongathanda ukuba ubhale ngayo kwaye ubhalele abaphulaphuli bam.
Faka imifanekiso okanye iividiyo ezinokuthi zisebenze kwibali endinokwabelana ngalo.
Nika amakhonkco ondithanda ukuba ndiwabelane nabafundi bam aya kuthi abanike ulwazi olongezelelweyo.
Yeka ubuvila kwaye unokufumana iziphumo ezingcono. Kucacile ukuba i-imeyile yakho yayisikiwe kwaye uncamathisele othumela ngokuzenzekelayo kwiibhlog ezininzi. Yiyeke. Funda iposti yam Indlela yokuPhakamisa kunye neMpembelelo, iBlogger okanye iNtatheli ukubona ukuba yenziwa njani!
tags: Ukuziphatha kakubiInqaku leBloggerugaxekile-spamInqaku lentatheliukumaprEyobudlelwane boluntuimizekelo yonxibelelwano noluntuinkundla yoluntuubudlelwane obubi phakathi koluntu
Indinike ukuhleka okokoko into yokuqala ethe yafika engqondweni yayiyi-SPAM. Ungacinga ukuba xa ufuna umntu abhale malunga nawe okanye inkampani yakho ungamnika loo mntu ulwazi oludingekayo ukuze ube nombono wokuba lingantoni na eli ziko. Njengoko oku kujongeka njengomyalezo wefom kusenokwenzeka ukuba uthunyelwe kwabanye abantu abaninzi becelwa into efanayo. Njengokuba benditshilo oko kwandenza ndahleka. Enkosi ngaloo nto.
Agasti 25, 2014 ngo-5: 30 PM
Hahaha! Kakhulu! Enkosi ngesikhumbuzo b / c ndingumsunguli kwaye andiyiyo ingcali yentengiso 🙂